Ameflu Ms (အမီဖလူ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ameflu Ms (အမီဖလူ)
Ameflu Ms (အမီဖလူ) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ameflu Ms (အမီဖလူ) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ameflu Ms (အမီဖလူ) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
အောက်ပါတို့ကို ကုသရန် Medication ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဦးခေါင်းရိုးရှိ Sinus ဟုခေါ်သော အပေါက်ကလေးများ ပိတ်ဆို့ခြင်း။
Ameflu Ms (အမီဖလူ) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးညွှန်းမှာဖော်ပြထားတာတွေကို အတိအကျ လိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက်ပိုသောက်ခြင်း၊သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလထက်ပိုပြီး စွဲသောက်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ရပါဘူး။
Ameflu Ms (အမီဖလူ) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ameflu Ms (အမီဖလူ) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုရင် ဆေးမသောက်ခင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။
Ameflu ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်တွေပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတိထားပြီး စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနစ်ရက်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ မသက်သာခြင်း သို့မဟုတ် အဖျားတက်လာခြင်း။
တောက်လျှောက်ချောင်းဆိုးနေခြင်းဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာခြင်းရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တပတ်ထက်ပိုပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ပျောက်သွားပြီးနောက်မှာ ချောင်းပြန်ဆိုးခြင်း၊အဖျားတက်လာခြင်း၊အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊တောက်လျှောက်ခေါင်းကိုက်နေခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး ပြသသင့်ပါတယ်။
အောက်ပါအခြေအနေတွေရှိနေရင်တော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အခါကလွဲပြီး ဒီဆေးကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ပန်းနာရင်ကျပ်၊နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ရောဂါ တို့ကြောင့် ကာလရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းအလွန်အကျွံဆိုးခြင်း။
နှလုံးရောဂါရှိခြင်း၊သွေးတိုးခြင်း၊သိုင်းရွိုက်ရောဂါရှိခြင်း၊ဆီးချိုရှိခြင်း၊digitalis ဆေးများ သုံးစွဲနေရခြင်း၊နာတာရှည်လေပြွန်ရောင်ခြင်း စသည့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများရှိသော သက်ကြီးရွယ်အိုများ သို့မဟုတ် ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်း။
ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်းပြင်းထန်စွာ ပျက်စီးနေသူများအနေနဲ့လည်း ဒီဆေးကို သတိထားပြီး သုံးစွဲရပါမယ်။ ကားမောင်းနေချိန် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအကြီးစားများ မောင်းနှင်နေချိန်တွေမှာလည်း သတိထားပြီး သုံးစွဲရပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ameflu Ms (အမီဖလူ) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Ameflu Ms (အမီဖလူ) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဤဆေးကြောင့် အချို့သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ
ဆေးပမာဏများပြားစွာ သုံးစွဲရသူတွေမှာ ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်းနဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားမှာ အနီစက်တွေထွက်ခြင်း၊နီရဲခြင်း ဒါမှမဟုတ် အင်ပြင်ထခြင်း စတာတွေလည်း ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသေးတယ်။ ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဆေးတွေက Ameflu Ms (အမီဖလူ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Medication ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ပါဆေးဝါးတွေဟာ Ameflu နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
 Monoamine oxidase enzyme inhibitors (MAOIs)
 Alkali ephedrine
 Aluminum hydroxide
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ameflu Ms (အမီဖလူ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ameflu Ms (အမီဖလူ) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ameflu Ms (အမီဖလူ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏကတော့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးဇွန်း (၂၀ စီစီခန့်)ကို ၆နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။၂၄နာရီအတွင်း လေးခါထက်ပိုမသောက်ရပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း သောက်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Ameflu Ms (အမီဖလူ) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၂နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာ ဒီဆေးကို မတိုက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ရပါမယ်။
အသက် ၂နှစ်မှ ၆နှစ်အထိ ကလေးများအတွက် : လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့တဇွန်း (၅စီစီခန့်)ကို ၆နာရီခြားတခါ တိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး
အသက် ၆နှစ်မှ ၁၂နှစ်အထိ ကလေးတွေမှာတော့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနဲ့ နှစ်ဇွန်း (၁၀ စီစီခန့်)ကို ၆နာရီခြားတခါ တိုက်ရမှာပါ။
Ameflu Ms (အမီဖလူ) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
medication ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆေးရည်ပုလင်း တပုလင်းလျှင် ၃၀စီစီ သို့မဟုတ် ၆၀စီစီ ပါဝင်ပါသည်။
Medication ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
AMEFLU® USES. http://www.ndrugs.com/?s=Ameflu%20e. Accessed November
Ameflu® Expectorant. http://made-in- vietnam.com/product/-703d16af. Accessed